त्यो एउटा त्यस्तो खबर जसले महराको इतिहास मेटायो | Citizen Post News
काठमाडौं । ०७६ असोज १२ गते अर्थात गत सोमबार आजैको दिन थियो । हाम्राकुरा डटकमका सम्पादक अजयबाबु सिवाकोटीले साँझपख सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत एक जना सांसदको कुकृत्य सार्वजनिक हुन लागेको जनाउ गरे । लगत्तै केहि समयपछि उनले आफ्नो अनलाइनमार्फत तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराको यौन काण्ड प्रथम पटक सार्वजनिक गरे-‘सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि जवरजस्ती करणीको आरोप शिर्षक र पीडितको घरमा गएको महराद्धारा स्वीकार उपशिर्षकमा ।’
जुन खबर विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत अहिलेसम्म सवैभन्दा बढी सेयर र हेरिएको खबरमध्येमा परेको छ । यो लेख लेखिरहँदा पहिलोपटक ब्रेक भएको उक्त खबर विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत १ लाख दुई हजार ९६ पटक सेयर भइसकेको थियो । एक हप्ताअघि अर्थात गत आइतबार उक्त घटना भएको थियो । तर समाचार भने सोमबार बेलुका मात्र ब्रेक भएको हो । उक्त समाचारमा १० मिनेट १ सेकेण्डको पीडित महिला रोशनी शाहीले हाम्राकुरा डटकमलाई दिएको भिडियो बयान, महराले बलात्कारको प्रयास गर्दा भएका घटनापछिको घटनास्थलको अवस्था र पीडितसँगै रहेका प्रमाणहरुसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो ।
समाचारमा संकलन गरिएका फोटाहरु, भिडियो बयानले खबरलाई पुष्टि गरिरहेको थियो भने अनेक आशंका पनि पैदा गरिरहेको थियो । के सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा बसेर यो हर्कत गर्न संभव छ ? के यो खबर सत्य होला र ? के प्रहरीले उनीमाथि अनुुसन्धान गर्ला ? के सत्य सावित भएको खण्डमा उनीमाथि कारबाही होला ? यस्तैयस्तै अनगिन्ति प्रश्नहरुले दिमाग भारी बनेको थियो । उक्त समाचारमा पीडितको नाम र गोपनियतालाई समेत लुकाइएको थियो । पीडितलाई भिडियो र फोटोमा अनुहार प्रष्ट नदेखिने गरी ‘ब्लर’ गरिएको थियो ।
जसबाट समाचार लेख्ने पत्रकार सिवाकोटीले आफ्नो ब्यवसायिक धर्म निभाएकोप्रति दुईमत थिएन भने महिलाको संवेदनशीलतालाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्थ्यो । अर्कोतर्फ पीडित महिलालाई न्याय हुनुपर्छ, उनले न्याय पाउनैपर्छ भन्ने चासोबाट पनि खबर सम्प्रेषण भएको प्रष्ट पढ्न र देख्न सकिन्थ्यो । पीडितमाथि भएको कुटपिटका घाउचोट, दाग र बलात्कार गरेको आरोप लागेका महराले पीडितको कोठामा पिउन लगेको रक्सी, दुई वटा गिलास, पीडितले प्लेटमा राखेर दिएको काँक्रो, महराको फुटेको चश्मा, जुत्ताको तलवा पनि समाचारमा फोटो र भिडियोसहित प्रष्ट देख्न सकिन्थ्यो ।
जसले समाचारलाई सथ्यतथ्य पुष्टि गरिरहेको थियो । यि सवै प्रमाण नियाल्दा आखिर किन पीडितका श्रीमान नभएका बेला सभामुख जस्तो ब्यक्ति त्यहाँ रक्सी र स्न्याक्ससहित पुगे ? केही न केही कनेक्सन नभई त यो काण्ड हुनै सक्दैन भन्दै लगभग यो भारी मनले अब उत्तर भने भेटिसकेको थियो । समाचार ब्रेक भएको दिन अर्थात गत सोमबार बेलुका राति १० बजेसम्म उक्त समाचारले मुलुक पिटी सकेको थियो । त्यसपछि सभामुख महराको सचिवालयले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर नै समाचारको खण्डन गर्यो । सचिवालयले खण्डन गरेको शैली भने प्रष्ट रुपमा महरा ‘बचाउशैली’ देखिएता पनि केही शंका–उपशंकाहरु भने उब्जाएको थियो कि कतै महरा सहि त छैनन् ?
कथामा नयाँ ट्विस्टः
खबरले सनसनी मच्चिरहेकै बेला सकारात्मक तथा नकारात्मक टिका-टिप्पणीले सामाजिक सञ्जालको मैदान भरियो । त्यसै माहोलमा एक्कासी अर्को एक अनलाइनमार्फत पीडित भनिएकी शाहीको अन्र्तवार्ता आयो । जसमा पीडित महिलाले उक्त ब्रेकिङ समाचार झुटा भएको, महराले बलात्कार नगरेको, उनी आफ्नो पिता सरह भएको भन्दै बयानबाजी गरेकी थिइन् । त्यसपछि थप अन्यौल बढ्यो भने खोजपत्रकारिता गर्ने पत्रकार सिवाकोटीमाथि थप चुनौती थपियो । उनी तनाब र दबाबका बिच थप प्रमाणसहित अर्को खबर खुलसा गर्ने तयारीमा जुटे । फेरि पत्रकार सिवाकोटीले दोस्रो खबर आफ्नो अनलाइनमार्फत ब्रेक गरे ।
जसमा पीडित महिलाले आफू बलात्कारमा परेपछि महराका छोरा, स्वयम् महरासँग भएका कुराकानीका म्यासेजलगायतका समाग्रीसहित खबर प्रकाशित भएको थियो । जुन भिडियो ७ मिनेटको छ । जसमा महराले ‘हिजाको कुरा विर्सीदेउ’ भन्दै भाइबरमा म्यासेज गरेका थिए भने पीडितले ‘तेरो सकिने दिन आयो, सवैतिर खबर गरिसकेको छु’ भन्दै उत्तर दिएकी थिइन् । दोस्रो पटक थप प्रमाणसहित प्रकाशित खबरले पत्रकार सिवाकोटीलाई थप बलियो बनायो । उनले पुष्टिसहित खबर प्रकाशित गरेको देखियो । त्यसपछि अत्तालिएका महरा निकटकाले पत्रकार सिवाकोटीको सामाजिक सञ्जालमार्फत उछितो काट्न सुरु गरे । उनीमाथि सुरक्षा थ्रेट परिसकेको थियो ।
पत्रकार सिवाकोटी र परिवारका सदस्यलाई अपरिचित नम्बरहरुबाट धम्की आए । जसबाट सहज अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो कि समाचार लेख्ने पत्रकारलाई यति ठूलो सुरक्षा थ्रेट छ भने महरा विरुद्ध बोल्न आँट गर्ने ती महिलामाथि के के भयो ? उनले कसरी बोली फेरिन होला ? त्यसो त नराम्रो कुरा फैलिन समय लाग्दैन, त्यो खबर आगोसरी फैलियो पनि । पीडितसँग घटना भएकै दिन राति प्रहरीले सोधपुछ तथा बयान लिएको थियो । प्रहरीले घटनास्थलमा देखिएका प्रमाणलाई फोटो तथा भिडियोमा उतारीसकेको थियो ।
भोलीपल्टै प्रहरीले सीसीटिभी फुटेजदेखि महरा र पीडितबीचको फोन सम्पर्कलगायतका विषय पनि अनुसन्धान गर्यो । पछि सीसीटिभी फुटेजले महरा उनको कोठामा गएको पुष्टि भयो । यो कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सम्म पनि पुग्यो । नेकपाले आकस्मिक बैठक राखेर प्रमाण देखाउँदै राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सघाउन निर्देशन दिने निर्णय लियो । त्यसलगत्तै महराले राजीनामा दिए तर किस्ताबन्दीमा । उनले उपसभामुखलाई दिएको किस्ताबन्दी राजीनामा पत्रले विवाद खडा गरेपछि पुनः सुटुक्क राजीनामा दिए ।
खबरको बलियो पाटोः
म आफैं पनि सञ्चारकर्मी हुँ, यदि मैले त्यो समाचार ब्रेक गर्ने अवसर पाएको भए सायद मैले पीडित महिलाको अडियो, भिडियो मात्र खिच्ने थिँए होला । तर महराको मोबाइलबाट पीडितको मोबाइलमा आइरहेको फोनको भिडियो अनि मोबाइलमा भएका म्यासेजहरुको ‘भिज्वलाइज’ गर्नतिर सायद ध्यान पुग्ने थिएन । त्यसैलाई ध्यान दिँदा थप प्रमाणसहित अर्को समाचार बन्यो । घटनालाई पुष्टि गर्ने अवसर मिल्यो । पीडितले फेरेको बयानलाई मात खुवायो । उनी टिभी जर्नालिस्ट पनि भएकै कारण प्रमाणलाई भिडियोमा खेलाउन सक्नु उनको कुशलता सफलतामा परिणत भयो ।
त्यसो त उनी ईमेज च्यानल, नेपाल वानलगायतका विभिन्न च्यानलमा पनि काम गरिसकेका अनुभवी पत्रकार हुन् । जसले मोबाइलका म्यासेजलाई पनि सुरक्षित गर्न प्रमाण स्वरुप भिडियोमा उतारेका थिए । जुन अमृत सावित भयो । उक्त काण्ड पक्ष विपक्षमा वहस चलिरहँदा उनले दोस्रो पटक सार्वजनिक गरेको भिडियोमा समेत आफ्नो पत्रकारिताको धर्म छाडेनन् । उक्त भिडियोमा पनि पीडितको अनुहारलाई ब्लर गरेर देखाइएको थियो । जबकी पीडित रोशनी आफैले आफ्नो परिचय र नाम सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था थियो ।
यि साना साना तर संवेदनशील विषयले उनलाई परिपक्व सम्पादकका रुपमा देखायो । उनले पस्केका विषयबस्तुले उनलाई थप बलियो बनाउँदै पुष्टि गर्न पनि बल पुग्यो । पीडितले आफ्नो भनाई परिवर्तन गर्दासमेत उनले ब्यवसायिक धर्म छाडेनन् । जसले गर्दा रोशनी आफैलाई ‘ब्याक फायर’ भयो भने त्यतिबेलासम्म तत्कालिन सभामुख महराले पदबाट राजीनामा दिइसकेका थिए । पत्रकारलाई गलत देखाउने ठूलो प्रयास भयो । महराका समर्थक र उनी निकटकाबाट पत्रकार सिवाकोटीलाई अप्रत्यक्ष रुपमा हतोत्साही बनाउने काम निरन्तर भए ।
उनमाथि 'रअ', 'सीआइए' को एजेन्टदेखि काँग्रेको कार्यकर्ता भएकोसम्म आरोप लगाइयो । पत्रकार सिवाकोटीलाई नै ‘ट्याग’ गरेर उनका फेसबुकमा नानाथरी लेखिए । कतिले फेसबुकमा बन्दुक देखाएर तर्साउन खोजे । तर पनि उनले हिम्मत हारेनन् । त्यसबीचमा, सिवाकोटी आफैले पनि बानेश्वरस्थित एक जना सांसदको रेष्टुरेन्टमा आफूलाई तह लगाउन योजना बुनेको रहस्य सार्वजनिक गरे । समाचार लेखेकै कारण आफू र आफ्नो परिवार असुरक्षित भएको भन्दै सुरक्षाको माग गरे । त्यसपछि बनेको माहौलले भने पत्रकारलाई साथ दियो ।
उक्त खबर बाहिरिएपछि महराले राजीनामा दिएको खबर विश्वभर फैलियो । जुन पत्रकार सिवाकोटीका लागि पत्रकारितामा ठूलो सफलता बन्यो । सायद पत्रकार सिवाकोटीले अहिलेसम्म गरेको रिर्पोटिङमध्ये यो सवैभन्दा उत्कृष्ट थियो । नेपालको इतिहासमा सवैभन्दा ठूलो पदमा रहेका ब्यक्तिमाथि बलात्कारको आरोप लागेको र समाचार आएपछि राजीनामा दिएको यो नै पहिलो घटना बन्यो । अन्ततः महरालाई घटना भएको ठिक एक हप्तापछि अर्थात आइतबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । हाल उनी महानगरीय प्रहरी बृत्त सिंहदरबारमा रहेका छन् । महराको राजीनामा पत्रकार सिवाकोटीको पहिलो सफलता बन्यो ।
खबर सार्वजनिक गरेपछि पत्रकार सिवाकोटी र उनको परिवारमाथि सुरक्षा थ्रेट बढ्यो । उनले समाचारलाई थप पुष्टि गर्नुपर्ने दबाब बढ्यो । त्यो पनि उनले पार लगाए । उनको यो दोस्रो सफलता थियो । उनको तेस्रो सफलता भनेको बलात्कार आरोपित महरालाई प्रहरीले आइतबार पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ । यो इतिहास हो । त्यो एउटा त्यस्तो खबर जसले महराको इतिहास मेटायो । त्यो एउटा त्यस्तो खबर बन्यो जुन खबरलाई विश्वका सवैभन्दा ठूलाठूला पत्रपत्रिका र अनलाइनहरुले समेत प्राथमिकताका साथ प्रमुख खबर बनाए ।